वर्षका चर्चित दस खेलाडी - फर्केर हेर्दा २०१७ - साप्ताहिक
वर्षका चर्चित दस खेलाडी
रोजर फेडेरर, टेनिस
धेरैको अनुमान थियो, अब रोजर फेडेरर पहिलेको जस्तो रहेनन् । उनमा ग्रान्ड स्लाम जित्ने क्षमता र आत्मविश्वास दुवै बाँकी छैन, तर यी स्विस खेलाडीले त्यसलाई गलत सावित गरे र सन् २०१७ मा आफूलाई विश्व टेनिस इतिहासकै महान् खेलाडी प्रमाणित गरे । यो वर्ष फेडेररले अविश्वसनीय रूपमा दुई ग्रान्ड स्लाम जिते, अस्ट्रेलियन ओपन र विम्बल्डन । पूरा वर्ष उनी विरलै पराजित भए । सबैले विश्वास गुमाइसकेको स्थितिमा फेरि उत्कृष्ट लयमा फर्कनुलाई उनको अनुपम पुनरागमन मानिएको छ ।
राफेल नाडाल, टेनिस
रोजर फेडेररकै समकालीन खेलाडी हुन्— राफेल नाडाल । उनका लागि पनि सन् २०१७ सम्झनालायक रह्यो । यी स्पेनी खेलाडीको खेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, रातो माटोमा उत्कृष्ट खेल्ने । त्यसैले उनी फ्रेन्च ओपनमा अत्यधिक सफल छन् । यसैक्रममा उनले यो वर्ष दसौं पटक फ्रेन्च ओपन जिते । नाडाल पनि अब पुराना खेलाडी भैसकेको धेरैको दाबी थियो । उनले उक्त भ्रमलाई मज्जाले तोडे । ‘किंग अफ क्ले’ उपनाम पाएका नाडालले यो वर्ष यूएस ओपन समेत जिते । यसै वर्ष नाडाल फेरि एकपटक एटीपीको नम्बर १ खेलाडी बने ।
सेरेना विलियम्स, टेनिस
कुनै समय थियो, महिला टेनिसका सफलतम खेलाडीमा जर्मनीकी स्टेफी ग्राफको नाम लिइन्थ्यो र दाबी गरिन्थ्यो, उनी जत्तिको सफल खेलाडी अब देखापर्ने छैनन् । त्यसलाई गलत सावित गरेकी छिन्, अमेरिकी अश्वेत खेलाडी सेरेना विलियम्सले । सन् २०१७ को पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन जितेर उनले नयाँ कीर्तिमान बनाइन् र त्यो थियो, २३ औं ग्रान्ड स्लाम उपाधिको उपलब्धि । त्यसक्रममा सेरेना ग्राफले जितेको ग्रान्ड स्लाम उपाधिको संख्यालाई उछिन्न समेत सफल भइन् । त्यसयता उनी गर्भवती भएकीले कोर्टमा देखा परिनन् ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबल
सन् २०१७ मा कुनै एक खेलाडी फुटबलको मैदानमा निकै चम्किए भने उनी हुन्— पोर्चुगाली खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो । रियलले सन् २०१७ मा अनेकन सफलता हात पार्‍यो, ला लिगादेखि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगसम्म । ती सबै सफलतामा रोनाल्डोको व्यक्तिगत प्रदर्शनको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यसैले त उनी फिफा मात्र होइन, बेलन डे अरमा समेत उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको दाबी अनुसार विश्व फुटबल इतिहासकै एक महान खेलाडी हुन्— रोनाल्डो ।
लियोनल मेसी, फुटबल
अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी पनि सन् २०१७ मा लगातार चर्चामा रहे । मेसीलाई पनि विश्व फुटबलले पाएको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट खेलाडी मान्नेहरू प्रशस्तै छन् । उनकै नेतृत्वमा यो वर्ष बार्सिलोनाले फेरि एकपल्ट अब्बल दर्जाको फुटबल खेल्न थालेको छ । अर्कातर्फ अर्जेन्टिना उनकै नेतृत्वमा विश्वकपमा छनौट हुन सफल भयो । पेरुविरुद्धको अन्तिम छनौट खेलमा उनले सिद्ध गरे, मेसी किन वास्तवमै उत्कृष्ट खेलाडी हुन् भन्ने कुरा ।
फुटबलमा अब्बल दर्जाको खेलाडीको मूल्य कतिसम्म हुन सक्छ ? सन् २०१७ ले यसको उत्तर पायो र त्यसक्रममा खेलाडी स्थानान्तरको नयाँ कीर्तिमान बन्यो— ब्राजिलीयन स्ट्राइकर नेयमारको नाममा । बार्सिलोनाका नेयमारका लागि फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले अविश्वसनीय रूपमा २६ करोड ३० लाख डलर तिरेको थियो । यसअघि उक्त रकमको आधामा विश्व कीर्तिमान बनेको थियो । त्यसअघि नेयमार र बार्सिलोनाबीचको झगडाले पनि उत्तिकै चर्चा पायो ।
स्टिभ स्मिथ, क्रिकेट
अस्ट्रेलियाली टेस्ट क्रिकेटका कप्तान हुन्— स्टिभ स्मिथ । उनकै नेतृत्वमा अस्ट्ेरलियाले सन् २०१७ मा फेरि एकपल्ट एसेज सिरिज जितेको छ । पाँच टेस्टको सुरुवाती तीन खेल लगातार जितेर अस्ट्रेलियाले एसेज जितेको हो । यो सफलताका पछाडि सबैभन्दा ठूलो भूमिका रह्यो, यिनै स्मिथको । उनी टेस्ट वरियताका नम्बर १ ब्याट्सम्यान हुन् र उनले आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार सुरुवातका तीनवटै टेस्ट निकै राम्रो खेले । अहिलेको पुस्ताका खेलाडीमध्ये टेस्टमा सबैभन्दा राम्रो औसत उनकै छ । त्यसैले उनलाई महान् डन ब्रेडम्यानपछि सबैभन्दा राम्रा ब्याट्सम्यान मान्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
विराट कोहली, क्रिकेट
सन् २०१७ मा क्रिकेटका सबैभन्दा ठूला नाममा रहे, भारतीय कप्तान विराट कोहली । भारत अहिले टेस्ट, वान डे र ट्वान्टी ट्वान्टी सबै किसिमका क्रिकेटमा लयमा छ र त्यस क्रममा टिमका तर्फबाट लगातार माथिल्लो दर्जाको खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडी हुन्— कोहली । कुनै समय थियो, विश्व क्रिकेटका सबै कीर्तिमान सचिन तेन्दुलकरको नाममा हुन्थ्यो । अचेल त्यही चर्चा कोहलीको नाममा हुन्छ । उनी गज्जबका ब्याट्सम्यानका साथै उत्तिकै आक्रामक कप्तान पनि हुन् । यो वर्ष उनी निकै चर्चामा रहनुको अर्को एउटा कारण थियो— बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मासँगको विवाह ।
लेविस ह्यामल्टन, फर्मुला वान
फर्मुला वानले अहिलेसम्म देखेका महान ड्राइभरमा बेलायती लेविस ह्यामल्टनको पनि नाम आउँछ ? सन् २०१७ ले यसको उत्तर दिएको छ । ३२ वर्ष पुगेका ह्यामल्टनका लागि यो वर्ष निकै राम्रो रह्यो र यसक्रममा उनले जिते, चौथो पल्ट विश्व च्याम्पियनसिप । फर्मुला वान इतिहासमै उनी सबैभन्दा बढी ७२ पल्ट पोल पोजिसन जित्ने खेलाडी हुन् । माइकल सुमेकरपछि फर्मुला वानलाई वास्तवमै कुनै ठूला स्टार खेलाडीको आवश्यकता थियो र त्यसका लागि ह्यामल्टन राम्रो विकल्प हुन सक्छन् ।
लिके मार्टेन्स, फुटबल
पुरुष फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसीजस्तै नाम हुन्, महिला फुटबलमा लिके मार्टेन्स । सन् २०१७ उनका लागि पनि निकै सुखद रह्यो । नेदरल्यान्ड्सले यो वर्ष वुमेन्स युरोपेली च्याम्पियनसिप जित्यो र त्यसमा सर्वाधिक राम्रो खेलाडी चुनिइन्, मिडफिल्डर मार्टेन्स । त्यसैले त फिफालाई पनि मार्टेन्सलाई यो वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गर्न गाह्रो भएन् । नेदरल्यान्डलाई महिला फुटबलमा सर्वाधिक बलियो बनाउनमा उनको ठूलो भूमिका छ । लिके बार्सिलोनाको महिला टिमबाट पनि खेल्छिन् । खेलका क्रममा बलमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्नु उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो ।
प्रकाशित :पुस २६, २०७४
मनाङ फेरि च्याम्पियन
सन २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने महिला खेलाडी
सन् २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने पुरुष खेलाडी
दुरगामी प्रभाव पार्ने वर्षका घटनाहरु
फर्मुला वानमा प्लेब्वाई मोडल
स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धि पुस १७, २०७४